सेयर कारोबारमा यी हुन् ‘टप फाइभ’ कम्पनी
यो साता सेयर बजारको परिसूचक बढ्न नसके पनि पाँच कम्पनीको कारोबार भने निकै उत्साहप्रद देखिएको छ।
स्टान्डर्ड चार्टड, एभरेष्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आरएसडिसी लघुवित्त र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कारोबारका आधारमा ‘टप फाइभ’भित्र पर्न सफल भए।
साताभर कुल १६१ कम्पनीको २ अर्ब ९६ करोडको सेयर कारोबार भएकोमा यी पाँच कम्पनीको मात्रै ७४ करोड ९९ लाखको भयो। जुन २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो।
स्टान्डर्डको २३ करोड ७५ लाखको सेयर किनबेच हुँदा एभरेष्ट बैंकको १९ करोड ६८ लाखको भयो।नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ११ करोड २५ लाख, आरएसडिसी लघुवित्तको १० करोड २६ लाख तथा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १० करोड ५ लाख रुपैयाँको कारोबार भयो।
चुक्ता पुँजी पुर्याउन स्टान्डर्डले शत प्रतिशत बोनस दिने प्रलोभनमा खरिदकर्ताहरु बढेका छन्। अर्कोतर्फ पुँजी वृद्धिसँगै आपूर्ति बढ्दा मूल्यमा गिरावट आउने आशंकाले बेच्नेहरु पनि कम छैनन्। जसले गर्दा कारोबार बढे पनि सेयर मूल्य बढ्न सकेको छैन। साताको पहिलो दिन प्रतिकित्ता २२ सय ८७ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको मूल्य अन्तिम दिन पनि सोही मूल्यमै अडियो।
त्यस्तै एभरेष्ट बैंकको कारोबार बढ्नुको प्रमुख कारण कम्पनीको हकप्रदका लागि बुक क्लोजको मिति घोषणा हुनु हो। असार १८ गतेदेखि ३ बराबर १ को अनुपातमा उसले हकप्रद बिक्री खुला गरेको छ।
कम्पनीको हकप्रदमा दावी गर्नका लागि असार ६ गतेसम्म सेयर किनिसक्नुपर्छ। जसले गर्दा खरिदकर्ताको संख्या बढ्न गई कारोबार उच्च भयो। स्थिर नेप्सेका बाबजुत मूल्य पनि सामान्य बढेपछि बिक्रीकर्ताको संख्या पनि कमी रहेन। आइतबार प्रतिकित्ता १६ सय ९० रुपैयाँमा रहेको मूल्य अन्तिम दिन १७ सय २४ पुगेको छ।
बिमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा र राम्रो पफर्मेन्स गर्दै आएको नेपाल लाइफको मूल्य अहिले निकै तल झरेकाले खरिदकर्ताको आकर्षण बढेको हो। चुक्ता पुँजी पुगिसकेकाले सो कम्पनीको हकप्रद नआउने भएपछि बेच्नेको भीडमा मौका छोपी सेयर किन्ने लगानीकर्ताको संख्या बढेको हो। १ वर्षअघि प्रतिकित्ता ४५ सय नाघेको कम्पनीको मूल्य अहिले २१ सय रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै छ।
आरएसडिसी लघुवित्तको कारोबार बढ्नुको प्रमुख कारण लगानीकर्तामा हकप्रदको प्रलोभन उच्च हुनु नै हो। कम्पनीले १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्न भन्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ।
प्रायः लघुवित्त कम्पनीको मूल्य उच्च भएका बेला हकप्रदमा प्रतिकित्ता १ सयमै किन्न पाइने, त्यसमाथि दुई गुणा बढी दावी हुने भएपछि किन्नेहरु सक्रिय बने। जसको प्रभावले अघिल्लो साताका हरेक दिन ९ प्रतिशतले मूल्य उचालिएर हाल प्रतिकित्ता २ हजार ९ सय नाघेपछि बेच्नेहरु पनि कमी भएनन्।
हकप्रदकै कारण एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पनि ‘टप फाइभ’भित्र पर्न सफल भएको हो। कम्पनीले ६ गुणा बढी हकप्रद दिने भएपछि खरिदकर्ता सेयर किन्न मरिहत्ते गरेर लागेका छन्। साताको पहिलो दिन २४ सय ६१ मा रहेको कम्पनीके मूल्य अन्तिम दिन बिहीबार बढेर २६ सय ४५ मा पुगेको छ।
कस्तो रह्यो साताको नेप्से ?
यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ६१ कम्पनीहरुको दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो।
कारोबार रकम गत साताको भन्दा ११ प्रतिशत कम हो। गत साता १ सय ५९ कम्पनीहरुको तीन अर्ब ३५ करोडको सेयरहरु खरिद बिक्री भएको थियो। साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ०.९० अंकले घटेर अन्तिम दिन १५ सय ८९ अंकमा कायम भएको छ।
समूहगत रुपमा हेर्दा बैंकिङ समूह यो साता २. ८८ अंकले बढ्यो भने विकास बैंक समूह २.५२ अंकले घट्ये। फाइनान्स र जलविद्युत समूहको गिरावट १ अंकमुनि नै रह्यो। होटल २०, बिमा ३५ र उत्पादनमूलक समूह ४१ अंकले घटे। अन्य समूह २ अंकले घटेको छ।
डिप्रोक्स लघुवित्त, कृषि विकास, सेन्चुरी कमर्सियल, ग्लोबल आइएमई बैंक, इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट, सगरमाथा फाइनान्स र माउन्ट मकालु विकासको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। तिमध्येकै सगरमाथाको भने हकप्रद सेयर पनि थपिएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३, २०७४ ०२:४४:०५